#GIS - Koorso Modeling iyo koorsada falanqaynta daadadka - iyadoo la adeegsanayo HEC-RAS iyo ArcGIS - Geofumadas
#GIS - Koorso Modeling iyo koorsada falanqaynta daadadka - iyadoo la adeegsanayo HEC-RAS iyo ArcGIS
Soo ogow kartida Hec-RAS iyo Hec-GeoRAS ee naqshadeynta kanaalka iyo falanqaynta daadadka #hecras
Koorsadan waxqabadka ah waxay ka bilaabataa xoq waxaana loo qaabeeyey talaabo talaabo ah, iyadoo laylisyada la taaban karo ay kuu suurta gasho inaad ogaato aasaaska aasaasiga ah ee maareynta Hec-RAS.
Iyadoo la adeegsanayo Hec-RAS waxaad awood u leedahay inaad sameyso daraasado daadad ah oo aad go’aamiso aagagga daadadka, adoo ku biirinaya qorshaynta magaalooyinka iyo qorsheynta dhulka.
Marka la barbardhigo koorsooyinka kale ee diiradda saaraya sharaxaada aqoonta farsamada, koorsadan waxay sidoo kale siisaa sharaxaad faahfaahsan oo fudud oo ku saabsan dhammaan tillaabooyinka la raaco marka aan rabno inaan bilowno daraasad daadad ilaa soo bandhigiddeeda ugu dambeysa, adoo adeegsanaya waayo-aragnimada la uruuriyay ka dib. in kabadan 10 sano oo loo qabtay daraasadaha noocan oo kale ah maamullada, dhiirrigeliyayaasha gaarka loo leeyahay ama mashaariicda cilmi baarista.
Samee daraasadaha haweenta ah ee kanaalka dabiiciga ah ama kuwa dabiiciga ah.
Qiimee meelaha daadadka webiyada iyo durdurrada.
Qorsheyso dhul ku saleysan aagga fatahaadda ama aaladda guud ee dareerayaasha.
Samee moodellada kanaallada ama qaabdhismeedka biyo-fallaaraha.
Ku daraan adeegsiga Nidaamyada Macluumaadka Juquraafiga (GIS) si loo fududeeyo loona wanaajiyo daraasadaha hayd-haynta.
Looma baahna aqoon hore oo farsamo ama softiweer in loo baahdo, in kasta oo ay fududeyn karto horumarka degdegga ah ee koorsada horay loo adeegsaday ArcGIS ama GIS kale.
Ka hor intaadan bilaabin, waa inaad haysataa ArcGIS 10 oo la rakibay, iyo falanqeeyaha Spatial iyo 3D kordhinta falanqaynta ayaa shaqeynaya.
Anshax iyo ujeedo barashada.
Qalin-jabiyaasha ama ardayda darajooyinka la xiriira maareynta dhulka ama deegaanka, sida Injineerada, Juquraafiyada, Architects, Joologists, cilmiga deegaanka, iwm.
La-taliyayaal ama xirfadlayaal daneynaya maareynta dhulalka, khataraha dabiiciga ah ama maaraynta dareeraha.
Koorsooyinka ArcGIS Koorsooyinka Xasaasiga ah ee Fog Koorsooyinka GIS
Post Previous«Previous #GIS - Koorso Muunad Daadinta Daadka - HEC-RAS xoq
Post Next #LAND - Koorsada Cirka Dhulka - GoogleNext »